Fampihenana ny sarety nilaozana amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity: Torohevitra 8 hampiantraika amin'ny varotra | Martech Zone
Alarobia, Desambra 14, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Curt Bloom
Vao haingana aho no nijery a Video an'ny mpitantana Target iray mijoro eo an-tampon'ny toeram-pizahanany, nanao kabary kabary tamin'ny mpiasany alohan'ny nanokafany ny varavarana ho an'ireo mpiantsena zoma mainty, namory ny tafiny toy ny hoe manomana azy ireo hiady izy.
Tamin'ny 2016, ny habom-pahefana izay Black Friday dia lehibe noho ny hatramin'izay. Na dia nandany aza ny mpiantsena eo ho eo $ 10 latsaky ny tamin'ny taon-dasa dia nisy mpividy zoma mainty telo tapitrisa bebe kokoa tamin'ny 2016 noho ny tamin'ny 2015, nitondra fiara $ 3.34bn (fiakarana 33%) amin'ny varotra.
Na izany aza, tamim-pamindram-po ho an'ireo mpiasa izay tsy maintsy niomana mafy noho ny fahirano, dia nitombo ny isan'ny mpiangona nisafidy ny hividy an-tserasera fa tsy amin'ny biriky sy fivarotana mortara. Tamin'ny 2015, olona 103 tapitrisa teo ho eo no nividy an-tserasera nandritra ny Zoma Mainty, raha mitaha amin'ny 102 tapitrisa ao amin'ny magazay. Tamin'ity taona ity, nanjary nalaza kokoa io fiovana io, miaraka amin'ireo mpiantsena maherin'ny 108 tapitrisa mividy an-tserasera, ary 99.1 tapitrisa no miatrika izany varotra izany raha ny filazan'ny NRF.
Raha ny tena manokana, ny finday dia nanjary mpandresy tamin'ny Black Friday 2016, miaraka amin'ireo mpivarotra am-bidy ao anatin'izany ny Amazon, Walmart, ary ny Target izay mitory ny andro be atao indrindra amin'ny fivezivezena finday. Na dia talohan'ny nifaranan'ny zoma aza dia efa nitatitra firaketana ny mpivarotra $ 771 tapitrisa amin'ny vola miditra amin'ny fitaovana #mobile
Mbola tsara kokoa noho izany, ny tahan'ny fiovam-po dia voalaza fa manana nitombo tamin'ny 16.5% hatramin'ny 2015, miaraka amin'ny tahan'ny fandaozana ny sarety dia nihena 3%. Na dia mety mieritreritra aza ianao fa antony iray handikana ny Prosecco sy hiarahaba ny tenanao noho ny asa vita tsara, ilaina ny fomba fijery sasany: amin'ny 2016, mpivarotra mbola very 69% amin'ireo mpiantsena zoma mainty an-tserasera izay nandao ny fividianany.
Tsy misy fikambanana tia mamela vola eo ambony latabatra, ary manandrana mamerina azy io dia manolotra hazakazaka mifanohitra amin'ny fotoana - rahateo, tsy dia maro ny mpanjifa no manohy mividy lafo vidy rehefa lasa ny Black Friday. Ambonin'izany, ny sasany amin'ireo fanentanana fihenam-bidy mahazatra dia tsy azo ampiharina amin'ity tranga ity. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ity misy toro-hevitra vitsivitsy hanatonana ny fanarenana sarety mandritra ity fetin'ny fialantsasatra ity.
Mahazoa saina: Ny rindrambaiko amin'ny marketing amin'ny fotoana tena izy no tokony ho lohavohanao. Miaraka amin'ity haitao ity dia ahafahanao manamboatra mailaka miaraka amin'ny 'smart blocks' - ampahan'ny atiny manokana izay ahafahanao mampiditra sora-baventy, timer de countdown, tolo-kevitra manokana ary porofo ara-tsosialy ao anaty hafatra nalefanao.
Fanarahana ny fotoana tena izy: Ny fotoana no tena fototr'izany, ny fahaizana manara-maso ny fandaozana ny sarety rehefa mitranga izany dia tena zava-dehibe. Na dia mety maharitra fotoana fohy aza ny fomba sasany hampitandremana anao amin'ny fandaozana (miandry fotoana fohy, ohatra), ampiasao rindrambaiko izay afaka manara-maso ny fandaozana amin'ny fotoana tena izy, ary mitarika mailaka fanarenana avy hatrany izay misy ny atin'ny harony.
Ataovy mora ny fiverenan'izy ireo: Raha tianao hiverina ny mpanjifa dia ataovy mora aminy. Ny atin'ny kalesiny, feno sary manaitra ny vokatr'izy ireo, dia tsy lazaina intsony, ary toy izany koa raha tokony hisy ny antso-to-hetsika malaza izay hamerina azy ireo haingana amin'ny dian'ny mpanjifa haka ny toerana nijanonany.
Ataovy izany manokana: Ny fampahatsiahivana malefaka miaraka amin'ny fiarahabana anao manokana sy / na ny tolo-kevitr'olon-tokana mba hamenoana ny sarety dia mety tsy hampiala azy ireo hiverina fotsiny fa hamporisika ny fividianana tosika fanampiny.
Mamorona fahatsapana fa maika: Raha ny eritreritry ny mpividy an-tapitrisany maro hafa mitady vidy varotra tsy mifanaraka amin'ny antony mandrisika ny fividianana, ny mailaka fanarenana izay mampiseho ny haavon'ny tahirinao ankehitriny dia mety hamono ny trano misy.
Ampahatsiahivo azy ireo ny antony itiavany tsiro: Nanana eritreritra faharoa ve ilay mpivarotra? Hamafiso ny fanapaha-kevitr'izy ireo amin'ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpanjifa tsara na fanamarihan'ny mpampiasa hanampiana azy ireo hiverina.
Ataovy mora kokoa ny fiainan'izy ireo: Ny saram-pandefasana tsy ampoizina matetika dia voatonona ho antony mahatonga ny fandaozana sarety - ny vidin'ny paositra be loatra dia mety hampiato ny tolotra fialantsasatra amin'ny maha-varotra ambany be azy ireo. Na izany aza, ny hafatra fanarenana sarety dia fotoana mety hampahatsiahivana ny mpividy ny tsindry & fanangonana na safidy fanaterana hafa natolotrao.
Esory izay fisalasalana: Amin'ny fahafaha-mitahiry vola dia ho avo kokoa noho ny mahazatra ny fakam-panahy manosika. Na izany aza, ny fikolokoloana dia mety hitarika nenina sy fandaozana haingana alohan'ny fividianana. Omeo toky ao anaty hafatra fanarenana izay manondro ny politikanao miverina, izay vola miverina dia manome antoka anao ary raha manome maimaim-poana ianao.
Raha ny fahitan'ny mpanjifa azy dia mora ny miara-miombom-pihetseham-po amin'ny antony sasany mety hamoahana ny varotra. Miaraka amin'izy ireo ny fotoana (ary mihena haingana ny tahan'ny tahiry) amin'izy ireo, ny filàna fizahana fizahana vola haingana sy haingana ary tsy misy tohana dia zava-dehibe. Ho an'ireo tranonkala nitaky kaody Black Friday manokana, afaka mampihatra mora foana sy mahita ny valin'ny fihenam-bidy (miaraka amin'ny sarany fandefasana) alohan'ny hahatongavanao amin'ny dingana fandoavam-bola dia afaka manimba na mamadika fiovam-po.
Toy izany koa, ilaina ny fizotry ny fisoratana anarana haingana. Miaraka amin'ny mpanjifa mety mitsidika tranonkala tsy mbola hitany taloha, ny tsy fisian'ny 'checkout ho an'ny vahiny', na ny fiatrehana endrika lava hamenoana alohan'ny hanandramana hihazona an'io MacBook Pro farany io dia miteraka sakana lehibe.
Miaraka amin'ny fizotry ny fizahana izay namboarina sy namboarina tsy hanana fihenjanana amin'ny birao, tablety na finday, feno fitaovam-piadiana fanarenana sarety feno fitaovana, dia mbola manam-potoana hijerena tsara ny varotra alohan'ny faran'ny taona ianao.
Tags: 2016black fridaympiantsena zoma maintybluevennbiriky sy rihitramividy an-tseraseraproseccompaninjara
Curt Bloom dia filohan'ny BlueVenn Etazonia, mpamatsy rindrambaiko marketing multi-fantsona manerantany. Curt teo aloha dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny smartFOCUS ary nandray anjara lehibe tamin'ny fampiroboroboana ny orinasa. Nanomboka teo dia niara-niasa tamin'ny fanombohana amerikana marobe i Curt, eo amin'ny sehatry ny media sosialy, ny firotsahan'ny mpanjifa amin'ny fotoana maharitra ary ny fanadihadiana. Amin'ny maha filohan'ny asan'ny BlueVenn US azy, i Curt dia manara-maso ny fanitarana ny BlueVenn manerana an'i Etazonia ary mitarika ny ekipa mitantana ny mpanjifan'ny Amerikana BlueVenn.